Unofanira Kuchenesa Rini Matrailer? - Shanghai KTG Auto Technology Co, Ltd.
Unofanira Kuchenesa Rini Matrailer?
Iko hakuna imwe, yakasarudzika poindi iwe yaunofanirwa kuisa nyowani mabhureki mune yako tirera.
Panzvimbo iyoyo, vanamakanika uye vagadziri vemabhureki zvakafanana vanoratidzira kuchengetedza imwe yemhando kusiyanisa kubatsira mamiriro akajairika emabhureki ako. Aya akasiyana, senge huremu hwetrailer yako, kudhonza frequency, madaro akafamba, kudhonza nzvimbo uye kunyangwe kutyaira maitiro zvese zvinokanganisa trailer brake yekutsiva mashedhiyo.
Nekudaro, pane mashoma matanho ekufunga paunochengetedza mhando uye kuvimbika kwemabhureki ako etrailer - pamwe nekurudziro yakananga kubva kubhuku rako remabhureki - uye nekuona kuchengetedzwa kwetambo yako.
1. Pamamirimita mazana maviri emabhureki akagadziriswa nemaoko
Zvinokurudzirwa kuti marara matsva, matsva-kunze-kwevatengesi matrailer aone mabhureki avo akaongororwa uye akagadziridzwa padyo nemakiromita mazana maviri.
Anenge mazana maviri mamaira inguva iyo bhutsu nemabhureki emabhureki, maviri epakati pezvikamu zveungano yemukati yemabhureki, achave "akagara". Bhutsu dzakagara zvakanaka uye madhiramu zvinosangana neako braking system's electromagnet uye yakakosha brake controller. Pamwe chete, zvidimbu izvi zvinokonzeresa kukakavara kunomisa karavhani yako nguva dzese paunotsikirira pasi pabhureki pachigaro chemutyairi.
Pasina shangu dzakagara zvakanaka uye madhiramu, mabhureki anononoka, asingashande kana - akaipisisa-mamiriro - kunyange ane njodzi.
Mushure mekuongorora mabhureki emakiromita mazana maviri, mabhureki etrailer anogona kuongororwa kamwe chete pagore, panguva yekuongorora marezinesi egore kana zvakawandisa zvinoda kutakurirwa netrailer yako.
2. PaMamiriyoni gumi nemaviri
Kuwedzera pakuongorora kwegore bhureki system, mavhiri anotakura anofanirwa kuverengerwa anenge gumi nemaviri mamaira. Kune inogara ichidhonza inorema-basa yekufamba matrailer uye yechishanu-vhiri maRV anoona akawanda mamaira mumugwagwa, iwo marongero anogona kunge ari kazhinji kazhinji.
Ziva, zvakadaro, kuti kuzora kana "kurongedza" mabheyari hazvina kufanana nekutsiva mabheyari. Nekudaro, iwo maviri akafanana maitiro ekuti kuwana mukati nekunze mabheyari zvinoda matanho akaenzana kune ese-kunze kuisa mabhureki matsva.
3. Kana Chinyorwa Chako Chichikurudzira
Tarisa mabhureki emabhureki akataurwa mubhuku rako remuridzi wetrailer kana rakagadzirwa neako axle mugadziri. Iri bhuku rinofanira zvakare kutsanangura zvakajairwa, nhanho-nhanho mirairo yekuisa uye kutsiva yako yemodheru chaiyo mabhureki zvinhu, gadzirisa zvigaro zvehombodo uye nemazvo kurongedza mabheyaringi ako.
4. Kana Brake Performance Kazhinji Inotambura
Shandisa njere kana zvasvika pakuchengetedza uye kutsiva yako mabhureki ematailer. Kana iwe ukacherekedza ruzha mavhiri mabhegi, asinganzwisisike mabhureki lags kana misiyano mukuomesa mabhureki, inguva yekuongorora zvinhu. Kana kugadzirisa shangu dzebhureki kuchiri kusatema, iwe unogona kunge uri nekuda kwekutsiva system.